Qurxinta - Shanghai Comi Aroma Co., Ltd.
Cunsurka kale ee muhiimka ah ee lagu gaadhayo muuqaalkaaga aad rabto waa habka aad u dhammaysatay baakadkaaga.
Waxaan kuu soo bandhigeynaa xulashooyin kala duwan oo aad kala dooran karto, oo ay ka mid yihiin midab caaryada ku jirta, buufin gudaha iyo dibedda ah, metallisation, iyo buufin dhameystir sida luul, matte, taabasho jilicsan, dhalaalaya, iyo barafoobay.
MIDABKA KU MID AH
Wax taaj oo kale oo duritaanka ah waa geedi socod wax soo saar ah oo lagu soo saarayo qaybo iyadoo lagu durayo waxyaabo kululey oo isku qasan, sida muraayadaha iyo balaastikada, caaryada meesha ay ku qaboojiso oo ku adkaato qaabeynta daloolka. Tani waa waqtigii ugu fiicnaa ee midabkaaga aad rabto uu qayb ka noqdo maaddada lafteeda, halkii markii dambe lagu dari lahaa.
GUDAHA / SABAXKA GUUD
Ku buufinta weelka weelka wuxuu siiyaa awood u leh inuu abuuro midab la qaabeeyey, naqshad, qaab-dhismeed, ama dhammaan - dhalooyinka ama caagga midkood. Sida magacu tilmaamayo, nidaamkan weelasha ayaa lagu buufiyaa si loo gaadho saamaynta la rabo - laga soo bilaabo muuqaalka barafoobay, dareenka textured, hal asal midab caadadiisu tahay dhammaystirka nashqadeynta dheeri ah, ama qaab kasta oo la isku halleyn karo oo naqshadeysan oo leh midabyo kala duwan, baaba 'ama gooldhaliyeyaal.
Farsamadan ayaa soocelinaysa muuqaalka chrome nadiif ah oo ku jira weelasha. Nidaamku wuxuu ku lug leeyahay kuleylka maadada macdanta qolka faakiyuumka illaa uu ka bilaabmayo uumi baxa. Birta uumiga ah ayaa isku ururinaysa oo ku xidhxidhan weelka, kaas oo loo rogayo si loo hubiyo in si isku mid ah loo adeegsado. Ka dib marka hawsha wax lagu qiimeeyo la dhammaystiro, dusha sare ayaa dusha laga marinayaa dusha sare ee dusha laga ilaaliyo.
SOO-QAADISTA & HELISTA
Embossing-ku wuxuu abuuraa muuqaal kor u kacay debossing-ku wuxuu abuuraa sawir gaabis ah. Farsamooyinkani waxay ku darayaan qiimaha calaamadeynta xirmada iyagoo abuuraya naqshad astaan ​​gaar ah oo macaamiisha ay taaban karaan oo ay dareemi karaan.
Farsamadan qurxinta ayaa ah qaab kale oo loo adeegsado shaashadda xariirta. Khadka ayaa loo wareejiyaa qaybta iyada oo loo marayo cadaadis iyo duubis silikoon ah oo kulul ama dhinto. Midabbo badan ama calaamado leh nus-cod, astaamo kala-wareejin kuleyl ayaa loo isticmaali karaa kuwaas oo bixin doona tayada midabka, diiwaangelinta iyo qiimeynta tartanka.
Hydro-graphics, sidoo kale loo yaqaan daabacaadda immersion, daabacaadda wareejinta biyaha, sawirka wareejinta biyaha, biyo gelinta biyaha ama daabacaadda cubic, waa hab loo adeegsado naqshadaha daabacan sagxadaha saddex-cabbir ah. Nidaamka biyo-soo-saarka waxaa loo isticmaali karaa birta, caagagga, dhalooyinka, qoryaha adag, iyo waxyaabo kale oo kala duwan.
Qurxinta, quruxda, iyo ganacsiga daryeelka shaqsiyadeed, baakadaha sidoo kale waxay ku saabsan yihiin moodada. Dahaarka barafoobay ayaa door muhiim ah ka ciyaara sameynta xirmadaada tafaariiqda tafaariiqda.
Hadday ahaan lahayd mid dhaxan leh ama dusha dhalaalaya, dahaadhku wuxuu siinayaa xirmadaada muuqaal gaar ah oo soo jiidasho leh.
KOOXAHA KUleylka / XUN
Shaabad kuleylka kulul waa farsamo lagu soo rogo warqad midab leh oo dusha sare ah iyadoo loo marayo isku dhafka kuleylka iyo cadaadiska. Shaabbinta kulul waxay soo saartaa muuqaal dhalaalaya oo raaxo leh oo ku saabsan tuubooyinka qurxinta, dhalooyinka, dhalooyinka, iyo xirmooyinka kale. Faylasha midabaysan badanaa waa dahab iyo qalin, laakiin aluminium caday & midabyo madmadow ayaa sidoo kale la heli karaa, oo ku habboon naqshadeynta saxiixa.